Esi hazie PayPal na PrestaShop, nzọụkwụ site nzọụkwụ | ECommerce ozi ọma
Iji chọpụta hazie PayPal na PrestaShopAnyị ga-ebu ụzọ kwuo banyere echiche abụọ ahụ. Maka ndị na-amaghị ihe ọ bụ gbasara, PayPal nwere usoro ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị maka ụlọ ahịa na-echekwa echekwa. Site na ibe a ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ozugbo ịzụrụ ngwaahịa na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Ugbu a, PayPal bụ otu n'ime usoro ịkwụ ụgwọ kachasị n'ịntanetị kachasị ewu ewu na ahịa, nke a bụ n'ihi nnukwu ịdị mfe nke iji ya na ngbanwe ọ na-eweta ka anyị wee nwee ike iji ya dị ka usoro ịkwụ ụgwọ dijitalụ, karịa usoro ọdịnala ndị ọzọ dị ka kaadị akwụmụgwọ.
Y PrestaShop bụ sọftụwia ecommerce bụ isi n'efu, site na nke ndị ọrụ ya nwere ike ịmepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị n'ụzọ dị mfe ma dị irè, na-ewepu ụdị mgbochi ọ bụla nke teknụzụ na ego nke achọrọ n'ozuzu maka ụdị azụmaahịa a.
PrestaShop na-arụ ọrụ nke ọma kemgbe 2007, ka ibu taa ihe ahia e-commerce a ma ama n’ụwa nile, nke nwere ihe karịrị ụlọ ahịa 165,000 dị n ’ụwa nile.
1 Etu esi hazie PayPal na PrestaShop?
2 Melite PayPal na PrestaShop 1.6
2.1 Akaụntụ Paypal:
2.2 Ntinye aka API:
2.3 Banye PayPal:
2.4 Asambodo API:
2.5 Rịọ onye mbinye aka API:
2.6 Aha API na paswọọdụ na mbinye aka:
3 Melite PayPal na Prestashop 1.7
3.1 Ntinye nke modul PayPal na PrestaShop 1.7.
3.2 Interface interface modul na PrestaShop 1.7
3.3 Nhazi nke usoro PayPal na Prestashop 1.7
3.4 Nhazi nke usoro PayPal na PrestaShop
Etu esi hazie PayPal na PrestaShop?
Na mmeghe nke na-esonụ, anyị ga-ahụ usoro iji soro iji rụọ ọrụ Nhazi PayPal na ụdị ugbu a nke PrestaShop, mbipute 1.6 wepụtara na Machị 2014 na nke 1.7 nke emere na November 2016.
Melite PayPal na PrestaShop 1.6
Ime Nhazi modul PrestaShop ọ dị mkpa na site na mgbe ahụ anyị emeela akaụntụ PayPal, nke dị mkpa ịnọgide na usoro nke nhazi nke modul maka ugwo na PayPal na PrestaShop.
Ọzọ anyị ga-akọwazu ihe isi usoro iji nwee ike hazi Paypal na PrestaShop
Ọ bụ ihe isii mfe nzọụkwụ nke ahụ ga - enyere anyị aka ịme usoro a ngwa ngwa na enweghị nnukwu nsogbu.
Dịka e kwuru n'elu, ịnwe akaụntụ PayPal ugbua mepụtara ga-abụ ụzọ mbụ dị mkpa iji hazie na PrestaShop. Naanị n'elu isi mbụ nke ogwe nhazi ahụ, anyị nwere ike ịhụ ajụjụ a: You nwerela akaụntụ azụmahịa PayPal?
Ajuju a anyi aghaghi iju zaghachiỌfọn, site na mgbe ahụ anyị ga-ekpuchi ihe a chọrọ n'enweghị nsogbu.
Ntinye aka API:
Nzọụkwụ ọzọ nwere njikọ na Inweta API Mbinye aka, ebe anyị ga-aga ozugbo na isi nke atọ nke ogwe nhazi, nke akpọrọ "Mee ka ụlọ ahịa ịntanetị gị rụọ ọrụ ịnakwere ịkwụ ụgwọ PayPal".
Obere gaa n'ihu, anyị nwekwara ike ịhụ mmanya oroma akpọrọ "Nweta nkọwa PayPal m«, Na nke anyị ga-pịa aka ịnọgide na usoro na-aga nzọụkwụ nke atọ nke a ndu.
Na ndị na-esonụ oyiyi anyị nwere ike na-ede na n'ụzọ zuru ezu nke atọ isi nke Peeji nhazi PayPal, ebe ị nwekwara ike ịhụ bọtịnụ oroma na anyị ga-pịa ka ị gaa n'ihu.
Mgbe o nyechara pịa bọtịnụ oroma, Window ga-egosi na-ajụ anyị banye na PayPal, dịka enwere ike ịhụ na foto gara aga.
Anyị ga nbanye Naanị site na itinye email na paswọọdụ nke emepụtara maka akaụntụ azụmahịa PayPal.
Ozugbo abanyela data ahụ, anyị ga-enweta naanị site na ịpị bọtịnụ "Banye", nke anyị ga-aga n'ihu na nzọụkwụ ọzọ nke nkọwa a.
Iji hazie ịkwụ ụgwọ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, Ọ dị ezigbo mkpa na anyị nwere nzere API, nke anyị nwere ike ịrịọ na nhazi nke API asambodo na ikikere, nke bụ akụkụ nke nhọrọ nke abụọ nke API Access, dịka anyị nwere ike ịhụ gosipụtara na onyonyo a:
Dị ka a pụrụ ịhụ, nke a Enwere ike itinye n'ọrụ na weebụsaịtị na ụlọ ahịa ịntanetị, yana ịzụ ahịa ịzụkọtara ọnụ na ihe nkesa gị. N'otu aka ahụ, dị ka egosiri na onyogho a kwuru, anyị ga-ahọrọ njikọ nnweta nke nhọrọ 2, nke a na-akpọ "Rịọ maka nzere API."
Rịọ onye mbinye aka API:
N'ikpeazụ, ozugbo Ihe akaebe API, Peeji ebe ekwuru arịrịọ ga-emeghe, nke a ga-egosi na Asambodo API nwere ihe ato ato:
Aha njirimara API
Ihe paswọọdụ API
Ihe API mbinye aka ma ọ bụ API SSL ahịa akwụkwọ
Na ibe ohuru a, dika ị gha ihu na onyonyo a, aga enweta gi abụọ dị iche iche nhọrọ: “Rịọ ihe API mbinye aka” na “Rịọ ihe API Asambodo”.
N'okwu a, anyị ga-akara akara nke mbụ, nke na-enye anyị ohere ịrịọ mbinye aka API. Ozugbo ahọpụtara igbe a, naanị ịnabata ma zipụ ka ị gaa n'ihu na usoro ahụ.
Ihe onyonyo a na - akọwa ozi enyere n’usoro ntuziaka a.
Aha API na paswọọdụ na mbinye aka:
Dịka akụkụ nke isii, mgbe rịọ mbinye aka API, Ihuenyo ga-egosi na ozi ndị a:
Aha njirimara API:
N'otu akụkụ nke ọ bụla na ngalaba ndị a, anyị nwere ike pịa bọtịnụ "Gosi" ka e wee gosipụta ozi nke data ọ bụla, nke ga-adị ezigbo mkpa iji rụọ usoro na-esote na nke ikpeazụ nke nduzi nhazi PayPal a na PrestaShop.
Ọzọ, anyị nwere ike ịhụ na foto na-esonụ ihe akọwapụtara na mbụ.
Dị ka egosiri na oge gara aga, iji hụ ozi nke data egosiri na ibe a, naanị anyị ga-enye pịa bọtịnụ "Gosi", nke ga - eme ka ozi di iche puta ihe n’udi Koodu n’ebe ufodu.
Kwuru na data ga-adị idetuo na mado na ubi kwesiri nke uzo ato nke uzo nhazi modul, nke anyị nwere ike ịtụle na nke mbụ na usoro nke atọ nke ntuziaka a.
Mgbe ahụ, na onyogho na-eso, anyị ga-ahụ ebe ahụ, ugbua jiri akara Mbinye aka jupụtara na ozi ahụ enwetara na mmalite nke nzọụkwụ nke isii nke ndu anyị.
Dịka egosiri, n'akụkụ a ọ ga-adị mkpa iji mado ozi gbasara ya na gosiri akụkụ nke "Mbinye aka". Ndị ọzọ nhazi nhọrọ ga-ekpe ka ha na-, mgbe ahụ, anyị nwere ike pịa na-azọpụta button na emi odude na ala nke na peeji nke.
Site na nke a anyị ga-emechi nhazi nke usoro PayPal na Prestashop, na mbipute 1.6.
Melite PayPal na Prestashop 1.7
Ntinye ntọala PayPal na PrestaShop 1.7.
Dabere na mbipute nke Prestashop 1.7 nke anyị na-ejikwa, anyị nwere ike ọ gaghị enwe usoro Paypal arụnyere. Ya mere n'okpuru anyị nwere ọnọdụ abụọ dị iche iche.
A) PayPal modul arụnyere:
Iji nyochaa na anyị etinyeworị modul PayPal, anyị nwere ike ịga na taabụ "CUSTOMIZE", ebe anyị ga-abanye "Modul", mgbe ahụ "Modul na ọrụ", n'ikpeazụ anyị pịa taabụ "arụnyere modulu".
Mgbe e mesịrị, anyị nwere ike ịchọ ngwa ngwa PayPal site na ịpị igodo CTRL + F na ịpị paypal na igbe ọchụchọ. Ya mere, anyị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na anyị etinyela modul ahụ, ma ọ bụrụ na ọ dị, pịa okwu ahụ "Hazie"
B) PayPal modul arụnyere:
Ọ bụrụ na PayPal apụtaghị na taabụ "arụnyere modulu", nke ahụ pụtara na ọ ga-adị mkpa itinye ya. Iji mejuputa nwụnye ahụ, anyị ga-amalite site na ịme otu usoro ahụ maka ọchụchọ gị.
Nke mbụ, anyị ga-abanye na "CUSTOMIZE" taabụ, wee "Modul", wee si ebe ahụ gaa "Modulu na ọrụ", wee pịa taabụ "Nhọrọ". Anyị ga-achọ modulu "PayPal", nke anyị ga-abanye site na bọtịnụ "Wụnye".
Na foto na-esonụ anyị nwere ike ịhụ usoro a:
Interface interface modul na PrestaShop 1.7
Ugbu a ka anyị nwere ike - nweta nhazi nke modul PayPal, anyị nwere ike ịhụ taabụ abụọ: Ngwaahịa ”na“ Nhazi ”.
N'otu aka ahụ, anyị nwekwara ike ileba anya nhọrọ abụọ dị iche iche iji hazie: "Paypal" na "Braintree". N'ime ndị abụọ a, anyị ga - ahọrọ nhọrọ "Paypal" nke bụ ihe masịrị anyị. Iji rụọ ọrụ ma hazie ọkọlọtọ PayPal.
Nhazi nke usoro PayPal na Prestashop 1.7
Iji mee nhazi ahụ, anyị ga-eme naanị pịa na "Mee ọ rụọ ọrụ" button, nke na-egosi na rectangle n'aka ekpe, nke raara onwe ya nye PayPal na nke ga-enye anyị ohere ịbanye na peeji PayPal, ebe naanị anyị ga-abanye email anyị iji mepụta akaụntụ, ma ọ bụ banye na akaụntụ PayPal Ekerelarị na mbụ, ma emesịa nke a, anyị ga-ahọta mba ebe sitere na onye na-ahọta dị n'okpuru, na emesịa, anyị ga-pịa bọtịnụ na-aga n'ihu
Emesịa, onyogho ga-apụta nke bụ ịdọ aka na ntị inye ikike ngwa ahụ jiri igodo API anyi ma si otú a nwee ike iwekota na PayPal.
Continuega n'ihu na usoro anyị ga-enye ikike, na-eji bọtịnụ "Ee, ana m enye ikike m.", ma ọ pụtara na otu n'ime ụzọ abụọ ndị a:
Mgbe ị nabatịrị, windo ọzọ ga-emepe nke na-agaghị egosi na ikike ahụ gara nke ọma.
Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ - laghachi na nhazi nke usoro PayPal nke nrụnye PrestaShop anyị, iji bọtịnụ "Laghachi na PrestaShop ma ọ bụ "laghachi na 202 e-commerce", mgbe nke a gasịrị ederede ga-apụta ebe anyị ga-akwado na anyị ejirila Prestashop jikọọ PayPal, yana usoro ntuziaka iji kwado adreesị ozi-e ma mara ma enwere njehie na-aga n'ihu na iwu ahụ.
Nhazi nke usoro PayPal na PrestaShop
Mgbe ijikọ - PrestaShop 1.7 PayPal modul na akaụntụ PayPal, anyị ga-abanye na taabụ "Nhazi" nke usoro PayPal, ebe anyị ga-agbanwe usoro nhazi usoro ndị a:
Mee ọ rụọ ọrụ sandbox: Na onye ahọpụtara anyị ga-abanye na nhọrọ "Mba", ka anyị wee nwee ike ịnweta ezigbo ịkwụ ụgwọ kama ịnwale.
Actionkwụ ụgwọ edinam: Anyị ga-ahọrọ nhọrọ "Ọrịre", nke bụ ụzọ nkịtị esi ere PayPal
Gosi uru ndị ahịa gị nye PayPal: Ọ dị mma ịhọrọ akụkụ a na nhọrọ "Ee", ebe ọ bụrụ na anyị rụọ ọrụ ya, mgbe onye ahịa ahọrọ usoro ịkwụ ụgwọ, ọ ga-enwe ike ilele ozi gbasara uru ịkwụ ụgwọ na PayPal
Direct Access nyeere: N'ebe a, anyị ga-abanye nhọrọ "Mba", nke metụtara ntinye nke nkwụnye ụgwọ awara awara PayPal.
Kwadoro na gburugburu: N'ebe a, anyị ga-abanyekwa nhọrọ "Mba".
Ozugbo anyị mere mgbanwe ndị a, anyị nwere ike pịa bọtịnụ "Chekwa" Ya mere Anyị ga-emeworị nhazi PayPal anyị ma jikọta ya na PrestaShop 1.7.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Melite PayPal na PrestaShop